अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छुः महानगरप्रमुख महर्जन - हिमाल दैनिक
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १४:३७
अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छुः महानगरप्रमुख महर्जन कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिनुभएको छ । पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उहाँ पुनस् विजयी हुनुभएको महानगरवासी बताउँछन् । विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रुपमा काम गर्नुभएका उहाँले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । उहाँसँग राससले गरेको संवादः
प्रमुखका रुपमा निर्वाचित भएपछि अबका पाँच वर्षका यहाँका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरु केके हुन्?
विगतका पाँच वर्षमा गर्न नसकेका र अबका पाँच वर्षमा गर्न चाहेका कुरा केके छन्?
तपाइँले अघिल्लो कार्यकालमा जनतासँग गर्नुभएका सबै प्रतिबद्धता पूरा भए?
पूर्वाधार निर्माणमा अबका पाँच वर्षमा केके गर्ने योजना छ?
साइकल लेन निर्माण भयो तर छुट्टै लेन नभएकाले अझै सुरक्षित नभएको कुरा उठ्छ । साइकल लेन विकास र विस्तारको योजना के छ?
सवारी साधनको चाप बढिरहँदा पैदल यात्रुलाई सडक वारपार गर्न गाह्रो भएको देखिन्छ । आकाशे पुल निर्माणको योजना छ?
सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक बत्ती बिस्तारको योजना छ?
सरकारी विद्यालयमा स्थानीय अभिभावकको आकर्षण छैन र निजी विद्यालयका शुल्कका कारण अभिभावक हैरान छन् । यसमा तपाईँको ठोस योजना के छ?
महानगरमा ठूला अस्पताल छन् तर सहरी गरिबले त्यहाँ जान सक्दैनन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा पहुँच कसरी पुर्‍याउनुहुन्छ?
ललितपुरमा भएका कला, संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना केके रहेका छन्?
फोहरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको भर नपरी महानगर आफैँले व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छ?
अधिकांश वडामा खानेपानीको समस्या ज्युँका त्यूँ छ त्यसको समाधानको योजना के छ?
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुनस् रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ । मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन् यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम सुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ । अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गरेको छ त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन खास गरी विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्न के गर्न सकिन्छ?
उपत्यकाका नगरले समन्वयमा विभिन्न काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसमा के सोच्नुभएको छ?
महानगरपालिकाको ललितपुरकै अरु पालिका वा देशका अरु पालिकामा सँगसँगै अघि बढाउन के योजना छ?
गएको कार्यकालमा महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई वातावरणीय सुधार परियोजना भनेर सहयोग गरिएको थियो । सम्पदा सुधार भनेर गोदावरी चापागाउँको गुठी भवन बनाउन सहयोग गरेका थियौँ । गोदावरी नगरपालिकाको कटुवाल दहमा मन्दिर बनाउन सहयोग गरेका छौँ । अहिलेसम्म गाउँपालिकालाई सहयोग गरेको छैन । भगिनी सम्बन्ध कायम भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा वातावरण सुधारका लागि सहयोग परियोजना छ । महानगरले छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने ट्रेन्ड नै बनिरहेको छ । आगामी दिनमा हामी बजेट पुस्तिकामा समेटेर सहयोग गर्नेछौँ । रासस/सञ्चिता घिमिरे
अघिल्लोघट्यो सुनको मूल्य
पछिल्लोझण्डै ३ घण्टा समय खर्चिएर ओलीले भनेः नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको सम्बोधन गर्दैन